Vanhu vasingaverengeki mupasi rose vanopesana neptpt, uye vazhinji havazvizive. Iyo yakajairika yemanje chirongwa chekudya chinhu chakakura. Kudya shuga yakawanda, zviyo, uye zvikafu zvinovezwa zvinokonzeresa masero ako emafuta kuti afashise muviri wako neptin. Zviite zvinowanzoitika zvakakwana, uye muviri unoshanduka nekukonana neptpt.
Maitiro aya anoshandawo kune vanhu kuti vadzivise insulin. Zvinokusiya uchirwara, kupera simba, uye kufa nenzara nguva dzese- kunyangwe kana uchinge uchidya nenzira yakawanda kupfuura zvinodiwa nemuviri wako. Kana iwe uine zvido zvekudya nguva dzese uye uchigara uchingotarisa kune imwe svutugadzike yekukudzosera iwe kusvika nguva yekudya, ipapo pane mukana wekuti iwe uri leptin kuramba.
Kunze kwekutonga chikafu kuchiva (zvakanyanya kushuvira chikafu chisina hutano) zviripo zviratidzo zvekupokana leptin. Isu tinokupa zano kuti uedze kuyamura chikafu chako kuti kuve nemaawa mashoma pakati pawo, uye usazvirega uchidzikisira chinhu. Kana izvi zvikuomera iwe, pane mukana mukuru iwe uri leptin kuramba. Kurara kunyimwa uye kusadya zvakakwana kunogona kuve kwemhosva pamwe nekupikisa leptin.
Kana iwe uchidya uye uchiedza kuderedza uremu nekukurumidza, izvi zvinogona kusunga mune yako leptin kuramba munzira yakakura. Iyo inonyanya kuyedza yekucheka zvinoshamisa calorie yako yekudya paunenge uchiedza kuderedza uremu. Nekudaro, panguva ipi neipi yekunyanyisa calorie kurambidzwa kunogona kudzoka moto, zvichiita kuti muviri wako unoenderana nekuguma nekunyanyisa kuramba neptpt. Izvi zvinokonzerwa nenyaya yekuti mushure mekushomeka caloric modified, muviri wako unoita zvese musimba rake kubatisisa kumafuta akachengetwa. Izvi zvinoitika kune vanhu vazhinji netsaona kana ivo vachiedza kuchinja kune iyo inonyanya kuzivikanwa chikafu chePaleo.
Iko kusanganiswa kwekunetseka kwakanyanya uye kusakwana kwekurara kunodarika cortisol yako nemazinga ehomoni. Yakawedzera cortisol inoguma nekuwedzera kushushikana uye kurara kushoma, zvichitungamira kune yakashata kutenderera iyo inopera nenzira imwechete nguva imwe neimwe: hutano husina kunaka. Kana iwe usiri kutora chiito chekugadzirisa kusagadzikana kwako kana kuwana zvakakwana 7 kusvika maawa masere ekurara manheru ega ega, uri kuzviitira iwe kusaruramisira. Yakakwirira cortisol mazinga anokonzera leptin kuramba, uye kana ikasiiwa isingadzoreki, inogona kukonzera kufutisa, kuzvimba, uye kuwedzera njodzi yechirwere chemoyo.
Kana iwe uri kungodya shuga yakawandisa zvakadaro, saka izvi zvinogona kuva pakati pezvikamu zvekutanga zvekupokana kwako leptin. Shuwa inogona kukuvadza hutano hwako munzira dzakawanda. Pane chingori chimwe chinhu nezve shuga chinotibhejera uye chinoita kuti tirambe tichidzokorora. Kunyangwe isu tichizvida kana kwete shuwa zvine zvakanyanya kubata patiri. Kana iwe uri kuverenga izvi zvakanyanya zvakanyanya zvaunganzwisise, uye uine ruzivo rwekutanga-ruoko rweku kukwezva uku. Shuwa haingori confectionery, kumanikidzwa; hapana chakadai kumira kana uchinge uchinge uchinge uine shuwa ..
Isu tinopihwa zvikonzero zvakawanda zvekushuvira kwedu kweshuga: kutsvaga-kunakirwa kwehuropi kutenderera, kushomeka kwemukati, hutachiona hwematumbu, kushaya chikafu, hurongwa hwekudya husina kuringana, hunhu hwekuzvibata, kwakawandisa munyu, kuvigwa nematambudziko emanzwiro, kushaya hope, kushushikana… uye neyatinoda, kushayikwa kwechirango. Isu hatisi pakurasikirwa nekuda kwezvikonzero zvedu zvekupindwa muropa neshuga, asi kusaziva hakuna kukwana kutishandura kana maitiro edu. Dai kuziva kukwana isu tese taizohwina menduru dzegoridhe uye nyeredzi dzegoridhe mune yega nzvimbo yehupenyu hwedu. Kana paine chero chinhu, kuziva kunongoita kuti kunzwe kunge kwakanyanya… isu tinoziva zviri nane saka sei tisiri kuita zvirinani? Kunzwisisa kunoguma kwave kungova chimwe chinhu kuti isu tinzwe zvakashata nezvvedu.
Chiito chinotevera chekunzwisisa ndechokuedza uye kutsvaga mhinduro yacho. Isu tinotora zvinhu mumaoko edu pachedu uye nekushandira kuti tishandure shuga yedu yekuda-shuga kubva pane kuenda. Uku hachisi chinhu chinorwadza-, uye kungoti kana tanzwa kuti tiri kugadzira chimwe chinhu kuti chiitise uye isu tiri pachinangwa chekunhonga chero shuga yatinogona kuwana nekudzoka pakutanga.
Kana isu tikasarudza kunanga shuga yedu kutsamira, tinorwisa svutugadzike, tinosuka kicheni, torega imba yezvinhu zvese uye titaure shuga muvengi. Uye izvi zvakanaka ... kunze kwekunge zvisingashande. Patinogadzira chirongwa chekuita chakadai, isu tiri vaviri zviito zvakanyanyisa kumberi uye kubata nemirairo isiriyo. Hatigadzirise zviri kutora nzvimbo chaiko.
Chakavanzika: tarisa nyaya yechokwadi, kwete mhedzisiro yemhedzisiro yacho. Uye kuchiva kweshuwiti ndiko kukonzera-mugumo, ivo chiratidzo chechinetso chaicho, uye kubata zviratidzo hakuzomboiti kuti nyaya iwedzere simba. Nzira chete yekuvandudza yechokwadi, yakareba-yakamira shanduko ndeyokugadzirisa iyo yakakonzera iyi ine njodzi shuga cracings ... zvikasadaro iwe uri kungotambisa nguva yako uye kuzvigadzirira wega mune ramangwana shuwa kurumwa.
Chii chinonzi kukonzera? Iko kuramba kwe leptin kwatakambotaura nezvayo. Imwe nzira yekudzora shuga yako kuchiva uye kudzoreredza leptin kuramba iri nechisikigo chekuwedzera leptitox, iri musanganiswa we22 zvese zvakasikwa zvinoshanda zvinosangana nemuviri wako kudzosera leptin kuramba uye zvinokanganisa. Kana kukana kwe leptin kukaitika mumuviri wedu tine gadziriro yekushanda. Uku kuputsika kuchaburitsa zviratidzo zvinonetsa. Kwete kungoita kuti leptin kuramba inowedzera chishuwo asi inobereka kuchiva! Icho chirevo chejodzi! Kwete chete kuti iwe uchazofa nenzara asi iwe unenge uchishuva zvakanyanyisa marudzi ezvikafu zvinogoneka ...
Tinogona kunge takapomera zvimwe zvese pasi pezuva nekuda kwekusagona kwedu kumira kune inotevera cookie ... zvese asi leptin kuramba. Kana iwe uchida kuona chaicho kufamba uye shanduko iwe unofanirwa kunongedza leptin kuramba uye ita chimwe chinhu kuti "chigadzirise" icho.
Izvo 22 zvisanganiswa muLeptitox zvinobatana kuita 3 zvinhu: batsira muviri detox, dzora zvishuwo uye kusimudzira hutano uremu huremu Door yezuva nezuva mapiritsi e2 anotorwa kamwe chete pazuva, uye inorayirwa kutora iwo 2 macapiritsi 20-30 maminetsi usati wadya. Kana iwe uri mutsva kutora ma supplements, tinokupa zano kuti uise alarm pafoni yako kuti ikubatsire kukurayira kuti uzvitore iwo usati wadya.
Kana iwe uchizeza nezve kuongorora chigadzirwa ichi kunze, Leptitox inoshandisa yakazara 60 zuva remari-kudzoka saka hauna kana chaunomborasikirwa kana ichi chawedzerwa chisingashande iwe. Order Leptitox nhasi uye uzviyedze iwe.